China Horizontal Slurry Pump အပိုပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Depump Technology
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > အပိုပစ္စည်း > အလျားလိုက် slurry စုပ်အပိုင်းအပို
အလျားလိုက် slurry စုပ်စက်အပိုအစိတ်အပိုင်းပါဝင်သည်: Impeller, အိမ်မှ, နောက်ဘက်ကိုယ်ရံတော်ပန်းကန်, အုပ်စုခွဲထုပ်ပိုးဂလင်း, ရိုးတံ, ရေတံဆိပ်လက်စွပ်, တင်သွင်းမှုနှင့်တင်ပို့တံဆိပျကိုလက်စွပ်စသည်တို့ပါဝင်သည် - အလွန်အကျွံလက်ရှိအစိတ်အပိုင်းများအတွက်ရရှိနိုင်သတ္တုအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်, နှင့်တိုး အတိမ်အနက်ကို။ ၎င်းကိုသတ္တု၊ သတ္တုတူးဖော်ခြင်း၊ ရေနံ၊ ဓာတုဗေဒ၊ ကျောက်မီးသွေး၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ မြစ်တူးခြင်း၊
ကျွန်ုပ်တို့၊ DePump သည် slurry ပန့်များနှင့် အပိုပစ္စည်းများအတွက် ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ မွမ်းမံပြင်ဆင်ပြီးနောက်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ slurry pump အပိုပစ္စည်းများကို မူရင်း slurry pump အပိုပစ္စည်းများနှင့် လုံးဝ လဲလှယ်နိုင်ပါသည်။ ဝတ်ဆင်ထားသော အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည့် impeller၊ သရက်ကင်း၊ လည်ချောင်းခြုံ၊ FPL ထည့်သွင်းမှု၊ ရှပ်၊ လက်စွပ်များ၊ Orings၊ အဝတ်လျှော်စက်၊ ဂလင်းထုပ်ပိုးမှုများ၊ bolt နှင့် အခွံမာသီးများပင်။
စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော အလျားလိုက် slurry စုပ်အပိုင်းအပို ကိုတရုတ်နိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်သောအနိမ့်ဈေးနှင့်စျေးပေါသောစျေးနှုန်းဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ Depump Technology သည်တရုတ်ပြည်၏ကျော်ကြားသော အလျားလိုက် slurry စုပ်အပိုင်းအပို ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်များရှိပြီးအမြောက်အများထုပ်ပိုးပါသည်။ ကျွန်ုပ်မှာယူမှုကိုယခုမှာယူလျှင်၊ သင်၌၎င်းမှာရှိပါသလား။ ဟုတ်ပါတယ်! လိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးနှုန်းစာရင်းသာမကဈေးနှုန်းများလည်းပါ ၀ င်မည်ဖြစ်သည်။ ငါလက်ကားရောင်းချင်ရင်မင်းငါ့ကိုဘယ်စျေးနှုန်းပေးမှာလဲ? သင်၏လက်ကားအရေအတွက်များလွန်းပါကစက်ရုံစျေးနှုန်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးပေါ်အရောင်းရဆုံး၊ အဆင့်မြင့်၊ လျှော့စျေးနှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားစေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသို့လာရောက်ရန်သင့်ကိုကြိုဆိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ထံမှလျှော့စျေးထုတ်ကုန်များကို ၀ ယ်ယူရန်စိတ်ချနိုင်ပါသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူပူးပေါင်းမျှော်လင့်, သင်ပိုမိုသိလိုလျှင်, သင်ယခုကျွန်တော်တို့ကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်, ငါတို့အချိန်မီသင်ပြန်ကြားမည်!